Sicirada ugu diyaarsan ee digital-ka ah 2021. Lacagta ugu wanaagsan ee dhijitaalka ah si aad u maal-galiso. Lacagta ugu habboon ee dijitalka ah oo leh koboc dhaqaale iyo is-bedel aan yareyn.
Sannadka 10aad ee ugu qanacsan lacagta dijitalka ah ee kobcinta dakhliga ee sannadkii la soo dhaafay.
Aaladaha dijitaalka ah ee ugu wanaagsan
Kobaca boqolkiiba hal sano
Dash (DASH) 154.60 %
Enjin Coin (ENJ) 990.67 %
Qtum (QTUM) 157.08 %
Basic Attention Token (BAT) 235.50 %
Multi-collateral DAI (MULTICOLLATERALDAI) 0.20 %
ZB Token (ZBTOKEN) 32.76 %
Dogecoin (DOGE) 1 984 %
ICON (ICX) 455.50 %
Decred (DCR) 710.50 %
Kuwa ugu kalsoonida badan ee loo yaqaan 'lacagta digital' waa adeegga websaydhka 'cryptoratesxe.com', oo soo bandhigaya sarrifka ugu sarreeya ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' oo leh kobaca sarrifka xasilloonida iyo codka hoose.
Adeegga khadka tooska ah ee internetka "midka ugu kalsoonida badan ee loo yaqaan" lacagta digital "wuxuu adeegsadaa dhammaan ilaha furan ee laga helo isweydaarsiga lacagta digital wuxuuna sameeyaa qiimeyn ee aaladaha lacagta ugu kalsoonida badan waqtiga dhabta ah.
Lacagta digital lagu kalsoonaan karo waa crypto, taas oo muddo dheer muujineysa heerka koritaanka daganaanshaha wanaagsan. Isbeddelka ku yimid qiimaha waa mid yar oo muhiim ah. Lacagta noocan oo kale ah, sida caadiga ah, waxay muujineysaa soosaar yar laakiin xasilloon. Khataraha maalgelinta maalgashi lacagta digital oo la isku halleyn karo waa yar yihiin.
Lacagta digital lagu kalsoonaan karo ayaa si fiican ugu habboon maalgashi xasilloon oo muddada dheer ah oo la isku halleyn karo.
Si ka duwan ah "Inta badan lacagta la isku halayn karo" adeeg, kaas oo muujinaya xasilloonida koritaanka wanaagsan ee heerka qiimaha lacagta digital, Lacag wanaagsan oo wanaagsan adeeggu wuxuu soo bandhigayaa adeegsiga aaladaha lacagta oo leh kororka ugu sarreeya ee heerka kicinta lacagta digital muddada la falanqeeyay.
Qiimaynta lacagaha ugu fiican ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' ayaa isbeddelaya khadka tooska ah, maaddaama ganacsiga ku saabsan isweydaarsiga lacagta digital uu socdo, oo heerka lacagta digital uu si joogto ah isu beddelayo.
Isticmaal adeegga "ugu kalsoonida badan" ee qadka loo adeegsado internetka oo bilaash ah.
The aaladaha lacagta ugu kalsoonaan karo loogu talagalay 2021
Liistada aaladaha lacagta lagu kalsoonaan karo $year waxaa lagu soo bandhigay xulasho 10 crypto ah oo kala soocaya kala amar bixinta kuwa ugu kalsoon ilaa kuwa aan la isku halleyn karin, iyadoo loo yareynayo kala dambeynta isku halaynta.
Aaminaadda ma leh astaamo u gaar ah, iyo marka la barbardhigo aaladaha lacagta, waxaan u soo bandhigeynaa macluumaad boqolkiiba boqol heerka kobaca sanadkii la soo dhaafay.
Qiimaynta aaladaha lacagta ugu kalsoonida badan waxaa loo soo bandhigay 2021. Awoodda iyo faa iidada lacageedani waxaa had iyo jeer kormeera adeeggayaga.
Booqo websaydhka oo adeegso adeegyada ugu sarreeya ee lagu kalsoonaan karo ee aaladaha lacagta for 2021.
Lacagta digital ugu aaminka badan 2021 waa adeeggeena internetka ee bilaashka ah, oo soo bandhigaya sida ugu aaminka badan, aragtidayada, aaladaha lacagta oo aad si badbaado leh u maalgashan karto.
Waxaan ku qiimeeynaa amniga xasilloonida xasilloonida ama xasilloonida. Waxaan tixgelin siin badbaado qarsoodi ah oo aan u oggolaaneyn qiimo-dhimis daran, xitaa wax u dhimaya koriimada firfircoon. Marka loo eego jaantuska isbedelka heerka lacagta digital deggan, waa inay muujisaa koboc xasillan sanad ilaa sannad si maalgashiga ku jira ay u soo noqdaan.
Xulasho cryptos aamin ah, qiimahooda iyo awoodooda ayaa lagu soo bandhigay 2021. Qiimaha iyo firfircoonida sarrifka lacagaha 'crypto sarrifku' wuu is beddali karaa maalin kasta iyo qiimeynteena sare "Lacag wanaagsan oo wanaagsan 2021" ayaa isbedelaya maalin walba.
Aaladaha lacagta oo leh koritaan xasilloon iyo kalsooni yar.
Qalabka loo yaqaan 'Aaladaha lacagta' oo leh koritaan xasilloon iyo kalsooni yar ayaa ka mid ah walxaha maalgashiga lagu kalsoonaan karo.
Kobcinta xasilloon ee crypto waa mid xiiso leh taas oo loogu talagalay xilliyo warbixino kala duwan oo aan si joogto ah u aragno faa'iido. Kobcinta xasilloonida ayaa dhiirigelisa maalgashiga crypto muddo dheer oo aan iibin lacag waqti gaaban.
Awoodda yar ee codka ayaa inta badan la mid ah xasilloonida waxayna muujineysaa inaysan xiiso lahayn in lacag lagu sameeyo noocaas oo kale waqti yar.
Maalgalin gaaban, waxaad ubaahantahay inaad raadiso lacagaha ay kujirto awood sarre si aad uxarato heerka ugu sarreysa uguna macaash iibinta lacagta digital.
A crypto leh cod yar iyo xasillooni aad u sarreeya ayaa ku habboon maalgashiga muddada dheer, laga yaabee dhowr sano.
Shaxda kuwa ugu kalsoonida badan oo aaminka ah ee aaladaha lacagta.
Shaxda kuwa ugu kalsoonida badan ee aaminka ah ee xasilloonida leh - muuqaal ahaan loo soo bandhigo qiimeynteena sare ee aaladaha lacagta ugu aaminka badan.
Jadwalka farqiga ugu badbaadsan ee crypto waxaad ka arki kartaa magaca lacagta loo yaqaan 'crypto currency' iyo sarrifka lacagaha ee doolarka Mareykanka.
Markaad gujiso mid ka mid ah waxyaabaha ugu kalsoon ee lagu kalsoonaan karo ee shaxda, waxaa laguu wareejin doonaa bogga oo leh macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan heerka sarrifka lacagta.
Shaxda jaaliyadaha aaminka ah ee aaminka ah.
Shaxanka khariidadaha ugu aaminka badan uguna kalsoonida badan waa aalad kale oo bilaash ah oo internetka ah oo soo bandhigaya qiimeynta sare ee aaladaha lacagta ugu kalsoonida badan.
Shaxanka khariidada ugu aaminka badan aaladaha lacagta waxay muujineysaa firfircoonaanta qiimaha 10ka sare ee ugu sarreeya amniga maalgashiga sida ku xusan qiimeynteena.